18 January 2018 အမ်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ အေးမောင် / ညိုဘန်း
အမ်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ အေးမောင်ကို ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းမှာ စစ်တွေ မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။
မနေ့က အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာ ဒေါက်တာအေးမောင်ကို နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ဖျက် ပုန်ကန်မှု ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၁၂၁ (ခ) (ဂ) ၊ နိုင်ငံတော် အကြည်ညို ပျက်စေမှု ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) (ဂ) ၊ မတရားအသင်းအက်ဥပဒေပုဒ်မ (၁၇) (၁) (၂) တို့ဖြင့် အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုသွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွင် ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်က ပြုလုပ်သည့် ရခိုင်နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာအာဏာကျဆုံးခြင်း (၂၃၃) နှစ်မြောက် ဝမ်းနည်းဖွယ်အထိမ်းအမှတ် စာပေဟောပြောပွဲမှာ ဟောပြောချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
လူစုလူဝေး ဖြစ်လာတာကြောင့် စစ်တွေ ထောင် ပြောင်းရွှေ့ မပို့ဆောင်မီ စစ်တွေ မြို့မ ရဲစခန်းမှာ စစ်ဆေးဖို့ ရောက်ရှိနေချိန် ဧရာဝတီ သတင်းထောက် မိုးမြင့်က ဒေါက်တာအေးမောင်ကို ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဒေါက်တာအေးမောင်ကို အခု စစ်တွေ အမှတ် ၁ (ရဲစခန်း) မှာ ခေါ်ပြီးတော့ မေးမြန်းနေတယ် လို့ သိရလို့ ခင်ဗျ၊ ဘာပုဒ်မနဲ့ ခေါ်တာလဲ ခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်က ဘာပုဒ်မလို့တောင် မသိသေးဘူး ခင်ဗျ။
မေး။ ။ အခု အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတော့ ရဲဘက်က ခေါ်မေးတာကလေ ဘာတွေများ မေးသေးလဲ ခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ ဘာမှတော့ မမေးသေးဘူး၊ နေရပ်လိပ်စာတို့၊ မှတ်ပုံတင်တို့ပဲ တောင်းတုန်း ရှိသေးတယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ နည်းနည်း ကြာနေတယ်။
မေး။ ။ တချို့ ပြောနေကြတာတွေကျတော့ တရားသူကြီးရဲ့ ချုပ်ရမန်ယူပြီးတော့ တခါတည်း တရားရုံးတင်မယ်လို့ ပြောနြေ ကတာ ကြားတယ် အဲဒါ ဟုတ်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ မပြောတတ်ဘူး။ ဟုတ်ကဲ့.. သူတို့ ထုံးစံအတိုင်း လုပ်မယ် ထင်တာပဲ။
မေး။ ။ အခုလိုမျိုး ဒီမိုကရေစီအစိုးရခေတ်မှာ အဖမ်းခံရတဲ့အပေါ် ဘာများပြောချင်ပါသလဲ ခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ ဟဲ ဟဲ.(ရယ်လျက်) ဒါက ပြည်သူ့အစိုးရ ခေတ်မှာ ပထမဆုံး လွှတ်တော်အမတ်ကို တရားစွဲတာပဲ။ ပြည်နယ်အစိုးရ ရောပေါ့။ ဒီသမိုင်းအရ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက်လေ နည်းနည်းလေး မဟုတ်ဘဲနဲ့ အများကြီး အမဲစက်ဖြစ်
တယ်။ ကျနော့်ကိစ္စထက် ပိုဆိုးတာက မနေ့ညက မြောက်ဦးမှာ ပစ်ခတ်တာပေါ့။ ရက်စက်တယ်ဗျ။ နန်းရာကုန်းမှာ ဖြစ်တာလေ။ အဲဒီ နှစ်ခုက သမိုင်းမှာ ဖျောက်လို့ မရတော့ဘူးနော်။ ရခိုင်တွေရဲ့ သမိုင်းမှာ ၁၉၆၇ မှာ ဆန် ပြဿနာဆိုတာ ရှိတယ်၊ ဒီနေ့အထိ လူတွေက သတိရနေကြသေးတယ် အဲဒီပြသနာကို။
အဲဒီလို ပြဿနာကို ဖြေရှင်းတဲ့ အခါမှာ ဆင်ခြင်တုံတရား လိုတယ်၊ အပြုသဘောပေါ့ဗျာ။ အနာဂတ်မှာ ဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို ကြိုတင် မှန်းဆ တွက်ချက်ရတယ်။ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်လဲ၊ လုပ်လိုက်တဲ့ဟာက နောက်မျိုးဆက်တွေ ရင်ထဲမှာ ဆွေးဆွေး မြေ့မြေ့ စူးစူးနှိုက်နှိုက် ရင်ထဲမှာ နာကျင်သွားမှာလား။ နော် … ကျနော်တို့က အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး သွားတာကိုးဗျ။ပြည်ထောင်စု ဆိုတာ စုပေါင်းကြတာကိုး။ ငါချည့်ပဲ အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးလေ၊ သူ့ကိုလည်း ပေးအုပ်ချုပ်ရမှာပေါ့၊ အဲလိုဟာတွေကြောင့်လည်းပဲ ဒီနေ့အထိ ဖြေရှင်းလို့ မရသေးတာကိုးဗျ။ တပ်မတော်သားတွေ ဘယ်လောက်ပေးပြီးပြီလဲ၊ တိုင်းရင်းသားတွေကို ဘယ်လောက်ပေးပြီးပြီလဲ။
ဒါတွေကို ပြန်သုံးသပ်ရင် … အခုက ကျနော်တို့ ဟောပြောတာလေးတွေကို သတင်းစာထဲမှာ ပါလာတာနဲ့ တခြားစီနော် (ရယ်လျက်)။ ဟို… သဘောပေါက်လား မသိဘူး။ ကျနော်တို့ အသံဖိုင်လေးတွေ ခင်ဗျားတို့ ပြန်ရှာကြည့်ပါ ။ ရခိုင်လို ပြောတာတွေကို ဗမာလိုပြန်ပြီးတော့ လွှင့်ပေးမှာပါ။ အဲဒါတွေလည်း ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ။
ကျနော် တခုပြောမယ်။ ဝါကျ တကြောင်းဟာ အဓိပ္ပာယ် မပြည့်စုံဘူး၊ ဝါကျသုံးကြောင်းကို ဆက်ကြည့်မှ အဓိပ္ပာယ်က ပြည့်စုံမှာ။ အဲဒီမှာ အောက်ဆုံး ဝါကျ တကြောင်းကို အပေါ်တင်မယ်ဗျာ။ အပေါ်က ဝါကျနဲ့ ပေါင်းစပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာ အဓိပ္ပာယ်တမျိုး ဖြစ်သွားတာပေါ့၊ အဲလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ တပိုဒ်ချင်းစီ သုံးသပ်ပေါ့။ နိဒါန်း ၊ စာကိုယ်၊ နိဂုံး စသဖြင့်ပေါ့။ အဲဒါပဲ။ ခေါင်းစဉ်အောက်
ကနေ လျှော်ညီတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ (ဟောပြောပွဲမှာ) ပြောရတာပေါ့ဗျာ။
အဲဒီလို ပြောတဲ့ အခါမှာ ခုနက ဘာပေတံနဲ့တိုင်းမှာလဲ။ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ဖို့ ကြိုးစားလာတာ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ရှိပြီ။ စစ်ပွဲတွေ ဘယ်တော့ ရပ်မှာလဲ။ ဘယ်တော့ စားပွဲဝိုင်းမှာ သေသေချာချာပြောကြ ဆိုကြမှာလဲ။ တန်းတူအခွင့်အရေး ဘယ်တော့ပေးကြမှာလဲ။ ဒီပြသနာကို ဒီမှာမဖြတ်ရင် ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမှာလဲ။ အခုသွေးမြေကျသွားပြီ (မြောက်ဦး)။ နော်.. ရင်နာစရာတွေဗျ။
ခင်ဗျားတို့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ ပထမဆုံး လွှတ်တော်အမတ်တဦးကို တရားစွဲတာလေဗျ။ အမှုကလည်း တော်တော်ကြီးတယ် လို့ ပြောတယ်။ ကျနော် မမြင်ရသေးဘူး။ စွဲသင့် မစွဲသင့်.. ရှေ့ဆက်သွားမယ့်လမ်းကြောင်း … ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်ဗျာ.. ဟင်း ဟင်း… ပန်းနဲ့ပေါက်တာ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ နာကျည်းချက်တခု ဖြစ်သွားရင် ပြန်ဖြည်ရတာ ခက်ပါတယ်။ အဖုအထစ်တခုဆိုတာ ဖြစ်သွားရင် ပြန်ဖြည်ရတာ ခက်ပါတယ်။ ကိုင်း… မေးတာ ပြီးပီလား။
မေး။ ။ ခုနတုန်းက ဒေါက်တာလည်းပဲ ပြောသွားတယ်။ ကျနော်တို့လည်း ကြားတာပေါ့လေ။ နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု ပုဒ်မနဲ့စွဲတယ် ဆိုတာ ဟုတ်ပါလား။
ဖြေ။ ။ အဲလိုမျိုးလည်း ကြားတယ်ဗျ။ နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်ရအောင်.. (ရယ်လျက်) ခင်ဗျ၊ားကလည်း …. ကျနော်က လွှတ်တော်တွင်းမှာဗျ။ လွှတ်တော်ထဲမှာ ပြောကြဆိုကြတာပေါ့။ လွှတ်တော်ပြင်ပ လွှတ်တော်တွင်းဆိုတာ ချိတ်ဆက်ရတာပေါ့။ ဒါကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့လည်းပြောတာပဲ။ ဒါမှလည်းပဲ ကျနော်တို့သွားချင်တဲ့ နိုင်ငံသားမူလအခွင့်အရေးနဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ freedom of expression လွတ်လပ် စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်.. ဒါ အထူးသဖြင့် ခင်များတို့ (မီဒီယာ) ကဏ္ဍ.. ပြောကြဆိုကြတာပေါ့။ ခင်ဗျားကလည်းဗျာ၊ နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်ချင်ရင် ကျနော် ဒီမှာ (လွှတ်တော်)ထဲမှာ ဘယ်နေမလဲဗျာ။